Adidy fa tsy didy ny mifidy | NewsMada
Ela ny ela, tonga ny andro fandatsaham-bato. Araka izay maharesy lahatra ny mpifidy tsirairay ho filohan’ny Repoblika mandritra ny dimy taona manaraka io. Hanao ahoana? Be izay fifamahofahoan-javatra nialoha sy nandritra ny fampielezan-kevitra izay. Tsy fampielezan-kevitra akory aza no nataon’ny sasany, fa zavatra hafa.
Teo ny fifandroritana sy fifandirana ny amin’ny lalàm-pifidianana, ohatra. Nifamatotra amin’izany izay tsy nampitovy fijery taty aoriana: ny lisi-pifidianana, ny vola ampiasain’ny kandidà, ny isa sy ny toeran’ny birao fandatsaham-bato… Efa milamina sy mampitovy fijery ve ireny rehetra ireny? Na afo mbola tsy maty miotrika mangina…
Na ahoana na ahoana, tonga izao ny andro fandatsaham-bato amin’izay ho filohan’ny Repoblika: tsy azo ihodivirana, mila atrehina. Anjaran’izay mahatsiaro ho olom-pirenena ny manapa-kevitra: na hifidy na tsia, na hanao vato manankery amin’ny fisafidiana kandidà izay maharesy lahatra na tsia… Tompon’ny teny farany ny tena.
Adidy fa tsy didy ny mifidy: malalaka, tsy ifanerena… Na izany aza, tsy azo odian-tsy hita sy tsy maintsy zakaina koa izay ho vokatry ny fifidianana. Izay heverina na lazaina hoe vato iray ve dia mba ho aiza no mitambatra ho voka-pifidianana ankapobeny: ny iray miampy iray no tonga roa, telo, efatra… Manan-danja ny safidin’ny tsirairay.
Izay no handehanana mandatsa-bato, misafidy, manara-maso ny fanisam-bato, manaraka akaiky ny voka-pifidianana… Tsy mifarana eo amin’ny fandatsaham-bato ny adidy amin’ny fifidianana, tsy vita tanteraka raha tsy mivoaka ny voka-pifidianana ofisialy; eny, na ny fanarahana ny mety hisian’ny fifanolanana momba izany aza any aoriana.
Tsy vita eo amin’ny fanaraha-maso ny fanisam-bato sy fandehan’ny voka-pifidianana aza ny raharaha. Eo indrindra koa ny fanjohiana akaiky ny fanatanterahan’izay kandidà voafidy eo ny fandaharanasany, ny fanambiny, ny fampanantenany… Izay no tsy hanaovana befahatany ny fifidianana; na tsy didy aza fa adidy, miantoka ny hoavy.